I-Notre Dame: I-GPA, izikolo ze-SAT & UMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe
I-Notre Dame GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
IYunivesithi ye-Notre Dame GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
IYunivesithi yaseTeam Dame e-Indiana enye yeyunivesithi ekhethileyo kakhulu kweli lizwe, kwaye uya kufuneka ube ngumfundi oqinileyo ukuba angeniswe. Ukubona ukuba ungowendlela yokumkelwa, ungasebenzisa le sixhobo samahhala ukusuka eKappex ukuba ubale amathuba okungena.
Ingxoxo yeMigangatho yokuVunywa kweTech Dame
Ngaphezu kweyesibini kwisithathu kubafakizicelo kwiYunivesithi yaseTeam Dame bayayinqatshwa, kwaye abafaki izicelo abaninzi abaphumeleleyo banamaGPA kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni aphezulu ngaphezu komlinganiselo. Kwigrafu ngasentla, amanqaku ahlaza okwesibhakabhaka noluhlaza amela abafundi abamkelekileyo. Uyabona ukuba uninzi lwabafundi abangene kwiGPA kwi-"A", uhla lwe-SAT malunga ne-1300 okanye ngaphezulu (RW + M), kunye ne-ACT amanqaku angama-28 okanye ngaphezulu. Amanani aphakamileyo ngokucacileyo aphucula amathuba akho okufumana ileta yokuwamkela, kwaye abafakizicelo abanamandla kunabo bonke "abaneemilinganiselo" kunye namazinga aphezulu avavanyo.
Iyunivesithi iya kujonga ngaphezu kwamabanga xa ifika kwiirekodi zakho zemfundo. Abantu abamkelweyo baya kufuna ukufumana amabakala aqhubela phezulu, angabikho phantsi, kwaye baya kuqwalasela ukukhawuleza kwekharityhulam yesikolo sakho esiphakamileyo . Impumelelo kwimpumelelo ePhakamileyo, ukuCwangciswa koBucala be-International Baccalaureate kunye ne-Honors izifundo ziyakomeleza isicelo sakho ngokubonisa ukulungelelanisa umsebenzi wakho wezinga lekholeji.
Inkqubo ye-Holistic Admissions Process
Qaphela ukuba kuninzi amanqabomvu obomvu (abafundi abatshitshisiweyo) kunye namachashaza aphuzi (ulinde abafundi abafakwe kwibala) ezifihliweyo emva kohlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka kwigrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya ezajoliswe kwiTebora Dame azange zamukelwe. Qaphela kwakhona ukuba abafundi abaninzi bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku angaphantsi kwesiqhelo. Abantu abamkelweyo bathatha ingqalelo kwiimeko eziphakamileyo zezikolo zenu eziphakamileyo , kungekhona nje kumabakala akho. I-Notre Dame ilungu leSicelo esisisigxina , kwaye iyunivesithi inamkelwa ngokupheleleyo . Ukuthabatha inxaxheba ngokulandelelanayo , isicatshulwa esinamandla , kunye neencwadi ezivuthayo zinconywa zonke zifaka isandla kwisicelo esiyimpumelelo.
Ukuze ufunde kabanzi ngeYunivesithi yaseTeam Dame kubandakanya ukugcinwa kunye nezindleko zokugqwesa iziqu, iindleko, uncedo lwezemali kunye neenkqubo ezifundwayo zokufunda, khangela iprofayili yaseTeam Dame . Kwakhona, unokuphanda i-campus kule khenketho yesithombe kwiYunivesithi yaseTrace Dame .
Ukuba Uthanda I-Notre Dame, Uyakwazi Ukuthanda Ezi Zikolo
Abafundi abasebenzisa iYunivesithi yaseTrace Dame bavame ukuba ngabafundi abaphezulu, ngoko basebenza kwezinye izikolo ezikhethileyo. Ukuba ukhangele iziko elinamandla lamaKatolika, i- Boston College kunye neYunivesithi yaseGeorgetown ngokuqinisekileyo kufuneka bajonge. Ezinye izikolo ezithandwayo zezicelo ze-Notre Dame ziquka iYunivesithi yaseYale , iYunivesithi yaseVirginia , iYunivesithi yaseBrown kunye neYunivesithi yaseWashington eSt. Louis . Gcina ukhumbule ukuba zonke zezi zikolo ziyalahla abafundi abaninzi, ngoko uya kufuna ukuqinisekisa ukuba unesikolo esikhuselekileyo kwisikolo sakho sicelo.
Amanqaku afana ne-Notre Dame
IYunivesithi yaseTeam Dame yamandla amaninzi phakathi nangaphandle kweklasini yathola isikolo kwindawo edibanisa iikholeji zase-Indiana, iikholeji eziphezulu zaseMidwest , kunye neeKholeji eziphezulu zamaKatolika . Kwakhona i-yuyunivesithi yanikezelwa isahluko se- Phi Beta Kappa ehloniphekileyo yoluntu kwiinkqubo ezizinzileyo kwezobugcisa kunye nezesayensi. I-15% kuphela yeekholeji zeminyaka emine kuphela.
IYunivesithi yaseTeam Dame UkuLawulwa nokuLinda uLwazi lweDatha
UkuLawulwa noLwazi lweeDatha zoLwazi kwiYunivesithi yaseTrace Dame. Iinkcukacha ngokukhawuleza zeCapepex
Ngelixa igrafu ephezulu kule nqaku ichaza ukuba uya kufuna amanqaku aphakamileyo kunye neemvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo ukuze zamukelwe kwiYunivesithi yaseTeam Dame, ifihla into yokuba abafundi abaninzi abanamandla kakhulu abangenayo . sithatha idatha eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza kumfundi abamkelekileyo, sinokubona ukuba ikhoneni eliphezulu lasegrafu libandakanya uninzi obomvu nephuzi. Oku kusitshela ukuba abafundi abambalwa ababejoliswe ekufunyenwe kwi-Notre Dame babenokulinda kuluhlu okanye balahlwe.
Kutheni umntu onokuba ngumlinganiselo we "A" kunye no-1500 SAT angalahlwa? Izizathu zinokuba zininzi: isicatshulwa esicacileyo okanye esicacileyo sesicelo; ukungabikho kwezifundo eziphakamileyo zezikolo; ukubandakanyeka okanye ukubandakanyeka kwangaphandle kokubandakanya; ileta ekhuthazayo yinconywa; okanye into engavumelekanga njengesicelo esingaphelelanga. Izizathu zingaba neenkqubo ezithile, ezifana nesicelo sobunjineli abangazange bathathe izibalo eziphezulu kwizikolo eziphakamileyo .
Ukuthengwa kwe-SUNY GPA, SAT kunye ne-ACT Data
I-Stockton University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IDordt College Admissions
I-Tips Fashion ze-Ski kunye nokukhetha izambatho ezifanelekileyo
Ziziphi iingoma zomsebenzi?
Old SAT Vs. Isitifiketi SAT Redesigned
Bala iRhafu yeNgeniso yeNgeniso
I-Posibilidades idibanisa i-visa americana de turista
Izifinyezo kunye nezihloko Zonke abafundi beeKholeji kufuneka bazi
Imbali yeSanto Domingo, iRiphabliki yaseRominican
Iimbali kunye neMbali yeCinco de Mayo
Uhlalutyo lokuSetyenziswa koPhando
I-Tiger Woods: I-Biography ye-One Golf's Giants